မကွေးမြို့မှာ အမေစုကို အပုတ်ချနေတဲ့ ငါးမင်းဆွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မကွေးမြို့မှာ အမေစုကို အပုတ်ချနေတဲ့ ငါးမင်းဆွေ
မကွေးမြို့မှာ အမေစုကို အပုတ်ချနေတဲ့ ငါးမင်းဆွေ
Posted by ဘဲဥ on Mar 8, 2012 in Copy/Paste | 21 comments
မတ်လ (၇) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀)နာရီလောက်မှာ မကွေးမြို့ ကန်သာဈေးအနီးတဝိုက်မှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုတ်ချထားတဲ့စာတွေ ကောင်မလေး ၃ ယောက်တစ်ဖွဲ့ ကောင်လေး ၂ ယောက်တစ်ဖွဲ့ ဖြန့်ဝေနေတာပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်လာတော့ ငါးမင်းဆွေအမည်ခံ အပုတ်ချစာ ဖြန့်ဝေနေသူတွေ ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ မြို့ခံလူတွေကပြောပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ငါးမင်းဆွေကို မကွေးမြို့ ကြံ့ဖွတ် ရုံးထဲဝင်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်လို့ မြို့ခံကပြောပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
has written 82 post in this Website..
နေချင်သလိုနေ၍ လိမ့်ချင်ရာလိမ့်နေသူကို ဥဥဟုခေါ်သည်
View all posts by ဘဲဥ →
ဟာ ခက်နေပီ။မကွေးမြို့ မှာ အမာခံလူငယ်အဖွဲ့ ဝင်တွေရှိနေတယ်။
စာရွက်ဖြန့် တယ်ဆိုရင်လဲ ဆွေးနွေးဖို့ ခေါ်ယူသင့်တယ်။ဒီလူ
ငါးမင်းဆွေကတော့ဗျာ မနှစ်ကလဲ ဒီချုပ်ရုံးရှေ့ လာပြီး ဆန္ဒပြတယ်၊
ဘာညာလုပ်နေလို့ဦးဝင်းထိန်တို့ နဲ့ စကားပြောဆို ဆုံးမလိုက်တာ
ကြောင်ရိုက်မနာဆိုတာမျိုးပေါ့ (ကြောင်နဲ့ နှိုင်းဖို့တောင်မတန်ဘူး)
ရုပ်ကိုကြည့်ပါ့လား ကျောက်ကြောသေးပန်းထားတဲ့ အခွက်၊ ပါးစပ်မှာလည်းကြည့်အုံး
အမျိုးသမီးတွေ လုံချည်လာတာကျနေတာပဲ ရဲရဲနီလို့ ၊ ဥပဒိရုပ်က နည်းနည်းလေးမှ ယုံကြည်ချင်စရာမကောင်းဘူး
အဲဒီကောင်လား ရုပ်ကိုက မသာရုပ်နဲ့
မကွေးက ကောင်တွေကလည်း ဘာလုပ်နေလဲ ရိုက်လေ
အင်း ပြောရရင်လဲ မကောင်းဖြစ်မယ်။အရက်သမား၊ဖာကောင်းရုပ်နဲ့ 
ကွမ်းသွေးပေနေတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ ကောင်စုတ်။
ဒီကောင် တကယ့် ငကြောင်ပဲ …
သောက်ရှက်ကို မရှိဘူး ..
ရုပ်ကကို ကြည့်ပါလား ..
ခွေးကျွေးတောင် စားမယ့်ရုပ် မဟုတ်ဘူး … :x
ဒီအချိန်အထိ အရှက်မရှိ နောက်ပိတ် လုပ်ချင်နေတုန်းကိုး သမ္မတကြီးနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် လေးလေးစားစားနဲ့ တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် အမေစု ကိုများ လမ်းဘေးက တေလေဂျပိုး ငါးမင်းဆွေက တိုက်ခိုက်ရတယ်လို့ အဆင့်ချင်းတူအောင် အရင်လုပ်ပါဦး ကိုယ်ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာ အရင်ပြပါဦး သူများလုပ်နိုင်လို့ ဒီလောက်ဖြစ်လာတာကို မနာလို မရှုဆိတ် ဖြစ်နေရတာ ပင်ပန်းလွန်းပါတယ်
အော်…သူ့နာမည်က ငါးမင်းဆွေ တဲ့လား…
အောင်နက် တို့ ဂုတ်ကျားတို့ထက် နဲနဲပိုပြီးသင်ရလွယ်မဲ့ပုံဘဲနော်..
အင်္ကျီဝတ်ထားပုံကတော့ ဂျက်ကီလဲအဲလို ၀တ်ပေးထားလို့ရတာဘဲ…
သူ့ကို ကြံဖွတ်ကမွေးထားတာလား…သိတဲ့သူရှိရင်မေးကြည့်ပေးပါလား…ပြန်ရောင်းမလားလို့…ရွာက စောသာဂေး တို့ ဖထီးစောသာဝါး တို့ ကိုလက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါ…
ငါးမင်းဆွေ မဟုတ်ဘူး. ဖားမင်းဆွေ(ခ)ဘုန်းကျော် အဖေ။
ဒီလူကိုတော့ မြင်ဘူးပါပြီ (မှတ်မိသလိုတော့ရှိသား၊ ကြာလဲကြာပြီဆိုတော့ )
ဒေါ်စုကို တိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်တဲ့စာ ဆိုတာက
သူတို့ဝေတဲ့စာ သက်သေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းခိုင်းဗျာ
သေချာ ချက်ကျလက်ကျ ရှင်းနိုင်ရမယ်..
စောက်ခွက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ တစ်ထပ်ထဲပဲ။
ဝရမ်းပြေးနဲ့ အရပ်ပျက်မနဲ့ မျိုးစပ်ထားတဲ့ ဂျန်နရေးရှင်း
ငါးမင်းဆွေ ရှက်တတ်လျှင် လဲသေဖို့ကောင်းနေပြီ ။
ဒီအသက်ရွယ်ထိ အသိတရားမရတော့လျှင် … ဆေးမမှီတော့ဘူး … ။
လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါလျှက် သူတပါးကို အပုပ်ချပြီး ၊ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား( သူများကျွေးလည်းကျွေးမှာပေါ့) အကုသိုလ်လိုက်ယူနေတာ ….. စိတ်ရောမှန်သေးရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိသေးတယ် …. ။
အမေစုရေ …ငါးမင်းဆွေမကလို့ ၊ ဖားမင်းဆွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖွတ်မင်းဆွေပဲဖြစ်ဖြစ် ….. ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပါလို့ .. ဒီကဗျာလေးနဲ့ …. အားပေးလိုက်ပါတယ် …. ။
မကွေးက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကို လှမ်းမှာထားပါတယ်။
စာဝေတာကတဖွဲ့.. ပြီးတော့.. ငါးမင်းဆွေက..ရုံးထဲဝင်တယ်ဆိုပြီး..အတင်းကြီးဆွဲစေ့ထားသလိုပါပဲ..။
တင်ထားတဲ့ပုံကလည်း.. ရန်ကုန် NLD ရုံးလာတုံးကပုံအဟောင်းကြီးလို့ထင်ပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်ရင်.. အဲဒီဝေတဲ့စာဆိုတာကို ကြည့်ချင်ဖတ်ချင်သား..
စာထဲ..သတ်မယ်ဖြတ်မယ်..ခြိမ်းချောက်တာမပါရင်.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစော်ကားတာမပါရင်.. ကြိုက်ရင်ယူ..မကြီုက်ရင်.. ပစ်ပယ်တာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်..။
ဒီ ဖားမင်းဆွေဆိုတဲ့ ငနဲပေါ်လာပြန်ပြီလား ???? ဒီလိုအချိန်မှာပေါ်လာပြီး အမေစုကို အပုတ်ချရဲရလောက်
အောင် ဘာတွေရထားလို့လဲ ။ မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင် တခါထဲ ၀ိုင်းရိုက်ပစ်လိုက်… အေးရော။
ရိုက်ပီးပါပကော..သုံးခွ မြို့ကိုအမေစု လာပီးနောက်နေ့ပဲ …
သုံးခွ မြို့က အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်မှာ ကောင်မလေးတစ်အုပ်စု ၅ ယောက်လောက်ရှိမယ်. .ငါးမင်းဆွေရဲ့အဖွဲ့ကဆိုပီး စာလာဝေတယ်..ဘယ်ရမလဲ သုံးခွ ပဲလေ ၀ိုင်းရိုက်လွှတ်လိုက် တာ ထွက်ပြေးသွားကြတယ်….
Jealousy is not good. Notice, he may become U Saw’s style.
အဘ ဥက္ကာကိုကို’s Photos
ကြက်တူရွေးကတော်တော်… မယ်ဘော်ကကဲကဲပါ။ NLD တံဆိပ်ကလေး တပ်လိုက်ရင်ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်က…ိုယ် အာဏာရှင်ဖြစ်သွားသယောင်ယောင်ထင်တတ်ကြတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုပဲ နည်းနည်းလေး လွတ်လပ်တာနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူ ဟိန်းဟောက် မာန်ဖီတတ်တဲ့ လူတွေအများကြီးပါပဲ။ ခု ဒီပုံထဲက လူဆိုရင် မိတ္ထီလာမှာ လမ်းဘေးရပ်သမျှ ဆိုင်ကယ်တွေကို ဆွဲထုတ်။ ကားတွေကို နေရာရွှေ့ခိုင်း။ မရွှေ့ပေးတဲ့ကားကို ဆဲဆို။
အမယ်…သူက ကားနံပတ်ကို ဓာတ်ပုံတောင်ရိုက်လိုက်သေး။ ဘာလုပ်မလို့လဲမသိ။ အဲဒါ ရဲစိတ်ပါ။ ရဲမာန်ပါ။ အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုးတွေကို ကြံ့ဖွံ့တွေလုပ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ ကြံ့ဖွံ့တွေက ငြိမ်နေပြီး NLD တံဆိပ်တပ်လူတချို့က ဒီလိုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။
ဟိုကောင်မလာနဲ့။ ဒီကောင်အနားမကပ်နဲ့။ အဲ့နားမနေရ။ ဒီနားမရပ်ရ။ ကဲ…. ဒီလူတွေသာ အာဏာရလာရင် ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲလို့ တစ်ခါတလေ တွေးမိလာပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုလေးစားပါတယ်။ မပုတ်ခတ်ပါဘူး။ တချို့သော လူတွေကို ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေ ထောင်ကျနေတုန်းက ဒီလူတွေ ဘယ်ရောက်နေပါသလဲ။ ခေါင်းဆောင်တွေ ပါဝါပြန်ရလာချိန်မှာ ဒီလူတွေ ဇောင်းထလာပါတယ်။
လာမထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ် ဘာမှတ်လဲဆိုတဲ့ အချိုးတွေချိုးလာနေတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒေါ်စုလမ်းကြောင်းနောက်ကို သတင်းလိုက်ယူလာတာ ခြောက်ခေါက်ရှိပါပြီ။ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဒီလိုလူတွေ တွေ့လာရလို့ နည်းနည်းထုတ်ပြလိုက်တာပါ။
ဒီပုံထဲက လူက မိတ္ထီလာကမဟုတ်ပါ။ ရန်ကုန်ကလိုက်လာတာပါ။ နယ်ခံတွေနဲ့ မော်တော်ပီကယ်တွေတောင် အေးဆေးခွင့်ပြုထားတဲ့အရာကို သူကလိုက်လံလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ လမ်းရှင်းတယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီမှာ မော်တော်ပီကယ်တွေရှင်းပေးနေပါတယ်။ မြို့တိုင်းမှာ ဒေါ်စုလမ်းကြောင်းဆို မော်တော်ပီကယ်တွေ ကူညီပေးနေကြပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သိပါ။ NLD စွမ်းအားရှင်တွေ ဖြစ်နေကြပြီလား… ဒီလိုလူမျိုးတွေ အဖွဲ့ချုပ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ရောက်နေပါ သလဲ…. ???
ဟုတ်ကဲ့… ကျနော် ဥက္ကာကိုကိုပါ။ ဒီပုံကို ကျနော်ရိုက်လာတာပါ။ မကျေနပ်တာရှိရင် လာရှင်းနိုင်ပါတယ်။See More